Xiriirka Garsoorayaasha Oo Sharaxay Sababtii Loo Diiday Goolkii Saxda Ahaa Ee Cavani Uu Hogaanka Ugu Dhiibay Manchester United - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXiriirka Garsoorayaasha Oo Sharaxay Sababtii Loo Diiday Goolkii Saxda Ahaa Ee Cavani Uu Hogaanka Ugu Dhiibay Manchester United
Xiriirka Garsoorayaasha Oo Sharaxay Sababtii Loo Diiday Goolkii Saxda Ahaa Ee Cavani Uu Hogaanka Ugu Dhiibay Manchester United
April 12, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Xiriirka garsoorayaasha Ingariiska ee PGMOL ayaa difaacay go’aankiisa Manchester United looga diiday goolkii ay ka dhaliyeen Tottenham sababtoo ah Scott McTominay waxa uu qalad ku galay Son Heung-min.
Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa moodayay inay hogaanka u qabteen ciyaarta qeybtii hore iyadoo uu shabaqa u soo taabtay Edinson Cavani.
Laakiin goolka xiddiga reer Uruguay ayaa la diiday ka dib markii gacanta McTominay ay ku dhacday Son ka hor goolka. Ka dib markii ay VAR hubisay, garsoore Chris Kavanagh ayaa isticmaalay shaashada dhinac taala ggaroonka isagoo go’aansaday inuu goolka diido ka dib markii uu dhowr jeer daawaday ku celiska.
Waqtigii nasashada xiriirka garsoorayaasha Ingariiska PGMOL ayaa taageeray go’aanka garsoore Kavanagh iyagoo sheegay in dhaqaaqa gacanta McTominay inay aheyd mid qeyrul caadi ah. Bayaan ay soo saartay PGMOL ayaa lagu yiri:
“Sida uu McTominay u dhaqaajiyay gacantiisa waxay aheyd qeyrul caadi, wax taxadar ah ma uusan muujinin.”
Waxaa xaalada sii xumeysay gool uu dhaliyay Son ayay Spurs hogaanka ku qabatay ka hor waqtigii nasashada.
Daaficii hore ee Manchester City Micah Richards ayaa go’aanka iyo bayaanka PGMOL ku tilmaamay ‘ceeb’.
“Waxaani kubad ma ahan. Waan ogahay inaan kaftan iyo qosol ka dhigano go’aamadaan laakiin waxay ku ciyaarayaan kubadeena.
“Waxaa sii dhumaya aqoonsigii kubada. Haddii tani ay qalad aheyd, Roy Keane wuu saxan yahay waa inaan guryaheena iska aado. Gabi ahaanba waa go’aan doqomino ah.”